एकै जना पुरुषको १३ ओटी श्रीमती, ती १३ ओटै श्रीमती एकैचोटी गर्भवती – Ujyaalo Patrika
एकै जना पुरुषको १३ ओटी श्रीमती, ती १३ ओटै श्रीमती एकैचोटी गर्भवती
एउटा पुरुषको श्रीमती एउटा नै हुन्छ । कसैकसैले २ देखी तीसम्म बिहे गरेको हामीले देखेका र सुनेका छौं । तर कोहि मानिसको १३ जना श्रीमती हुनसक्छ ? अवश्य सक्दैन । मानिलिउँ १३ जना श्रीमती भएपनि के ती १३ जना श्रीमती एकैसाथ गर्भवती हुन सक्छन् त ? पक्कै सक्दैनन् । तर यो असम्भव सम्भव भएको छ । सुन्दा देख्दा र पढ्दा आश्र्चय लाग्ने यो कुरा साँचो हो ।
Previous आमाको खुसीका लागि युवतीले जन्माइन् आफ्नै बुवाको बच्चा
Next विवाह भएको तीन दिनसम्म शौचालय जान नपाउँने अनौठो चलन!